တဦးတည်းအမြှေးပါးနှင့်အတူတစ်ခုမှာ geotextile - တရုတ် Xi'an Homey နည်းပညာ
ဖော်ပြချက် Composite geomembrane အဓိကအား seepage အတှကျအသုံးပွုသော impervious ပစ္စည်းများ၏ရေးစပ် geotextile နှင့် geomembrane ၏ဖန်ဆင်းထားသည်, ပေါင်းစပ် geomembrane အထည်အမြှေးပါးနှစ်ခုအထည်များနှင့်တဦးတည်းအမြှေးပါးသို့ကွဲပြား, width ကို 4-6m ဖြစ်ပါသည်, အလေးချိန်, / m2 1500g ဖြစ်ပါတယ် ရေစည်ပင်သာယာ, ဆောက်လုပ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မြေအောက်ရထား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်အခြားလူထုအခြေပြုအင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောဆန့ anti-မျက်ရည်နှင့်ခေါင်မိုးကျိုးအဖြစ်မြင့်မားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူထုတ်ကုန်လည်း။ Becau ...
Composite geomembrane ပု, ပေါင်းစပ် geomembrane အထည်အမြှေးပါးနှစ်ခုအထည်များနှင့်တဦးတည်းအမြှေးပါးသို့ကွဲပြား, width ကို 4-6m ဖြစ်ပါသည်, အလေးချိန် / m2 1500g သည်အဓိကအားဖြင့် seepage အတှကျအသုံးပွုသော impervious ပစ္စည်းများ၏ရေးစပ် geotextile နှင့် geomembrane ၏ဖန်ဆင်းထားသည် ရေစည်ပင်သာယာ, ဆောက်လုပ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မြေအောက်ရထား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်အခြားလူထုအခြေပြုအင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းထိုကဲ့သို့သောဆန့ anti-မျက်ရည်နှင့်ခေါင်မိုးကျိုးအဖြစ်မြင့်မားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူထုတ်ကုန်။ သောကြောင့် Anti-အိုမင်းအေးဂျင့်ပေါင်းထည့်ရန်ပေါ်လီမာပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်၎င်း၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို Non-သမားရိုးကျအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Composite geomembrane ကျယ်ပြန့် 4-6m, အလေးချိန် 200-1500g / စတုရန်းမီတာ, ဆန့, မျက်ရည်, မြင့်မားသောညွှန်းကိန်းများကျိုးနှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများ, ထုတ်ကုန်မြင့်မားသောအစှမျးသတ်တိ, ကောင်းမွန်သော extension ကိုစွမ်းဆောင်ရည်, ပုံပျက်သောကိန်းပကတိတန်ဖိုး, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီ, Anti-ချေးရှိပါတယ် ဒါပေါ်, Anti-အိုမင်း, Anti-seepage စွမ်းဆောင်မှုနှင့်။ ရေကိုကွန်ဆာဗေးတစ်စည်ပင်သာယာ, ဆောက်လုပ်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မြေအောက်ရထား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, အ seepage အတွက်ဆောက်လုပ်ရေး, အထီးကျန်မှုတွေ, အားဖြည့်, အက်ကွဲအားဖြည့်နှင့်အခြားလူထုအခြေပြုအင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ လေ့ဆည်, anti-seepage ကုသမှုရေနုတ်မြောင်းမြောင်းများနှင့်စွန့်ပစ်သောလယ် ​​Anti-ပုပ်ကုသမှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
1, ဖို့မြေ, မိလ္လာသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ကုသမှု Anti-seepage ။
2, မြစ်တာတမံ, ရေကန်ဆည်, အမြီးဆည်, မိလ္လာရေကာတာနှင့်ရေလှောင်ကန်ဧရိယာ, ရုပ်သံလိုင်း, ရေလှောင်ကန် (သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့, မိုင်း) ။
3, မြေအောက်ရထား, မြေအောက်ခန်းများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း seepage နံရံ။
4, Roadbed နှင့်ဆား seepage ၏အခြားဒေသများ။
5, တာတမံ, Anti-seepage အိပ်ယာများ၏အဆင့်ကိုမရောက်မီအခြေခံအုတ်မြစ်ဒေါင်လိုက် impermeable အလွှာ, ဆောက်လုပ်ရေး cofferdam, စွန့်ပစ်သောလယ်ဆည်တည်ဆောက်မှု။
6, ပင်လယ်ရေ, ရေချိုမွေးမြူရေးခြံ။
7, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး, ရထားလမ်းအုတ်မြစ်, ကျယ်ပြန်မြေဆီလွှာနှင့်ခေါက် loess ရေစိုခံအလွှာ။
8, အိမ်ခေါင်မိုး seepage ။
1. တဦးတည်းအမြှေးပါးနှင့်အတူတစ်ခုမှာ geotextile
base အထည်: 100-1000g / m2 ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အထူ: 0.1-1.5mm
2. T က အထည်များနှင့်တဦးတည်းအမြှေးပါး wo
base အထည် 80-600g / m2 ရုပ်ရှင်ပွဲတော် thickness0.2-1.5mm
နောက်တစ်ခု: တဦးတည်းအမြှေးပါးနှစ်ခု geotextiles